Roobab mahiigaan ah oo ka da’ay qaybo kamid gobolada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandRoobab mahiigaan ah oo ka da’ay qaybo kamid gobolada Puntland
June 1, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Buundo kutaala Garoowe oo biyo marayaan. [Isha Sawirka: Said Sonna/Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobab mahiigaan ah ayaa ka da’ay qaar katirsan gobolada Puntland, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Roobabka ugu badan ayaa ka da’ay deegaano kuyaala gobolada, Karkaar, Nugaal, Mudug, sida ay wararku sheegeen.
Qayb kamid ah deegaanada ayaa laga soo sheegay daadad ay khasaare ka dhasheen.
Xoolo badan ayaa biyo la tageen sidoo kale dad ayaa la waayay kadib roobabka mahiigaanka ah.
Wadada isku xirta Garoowe iyo Boosaaso ayaa la sheegay in ay go’day.
Garoowe, caasimada Puntland ayaa muddo sideed saac uu roob ka da’yay. Daadad ka dhashay biyaha roobka ayaa maraya waddooyinka waa-weyn ee magaalada.
Haayadaha Puntland weli kama aysan hadlin inta ay la egtahay khasaaraha ay keeneen roobabku.
Roobabkan ayaa yimid iyada oo deegaanada Puntland ay ka jireen abaar aad u daran.
Golaha Wasiiradda Puntland oo ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda ayaa ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka kadib kulankooda asbuuclaha oo maanta oo Khamiis ah ay ku yeesheen magaalada Garoowe, ee caasimada. “Xeerka macdanta iyo shidaalka ayaa qeexaya iswaafajinta maalgashiga iyo shuruucda [...]
Puntland iyo Somaliland oo ku dagaalamay gobolka Sanaag: Warbixin
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Isniin ahayd ku dagaalamay gobolka Hayland, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha. Dagaalka u dhaxeeya labada dhinac oo la isku adeegsaday hubka culus ayaa bilaabmay [...]